SOMALITALK - GEDO
Warsaxaafadeed Madax Dhaqameedyada Beelaha Marexaan ee G/Gedo
Beled xaawa 13ka ogost,2002
warsaxaafadeedkaan waxaa soo saaray, ugaasyada, nabadoonada & odayaasha beelaha reer xassan, howraarsame iyo habar yaaqub oo ka mid ah beesha marreexaan ee gobolka gedo.
shir ay ku yeesheen degmada b/xaawa ee gobolka gedo dhammaan madax dhaqameedyada saddaxda beelood ee kor ku xussan 10-12kii august, 2002 waxay ka wada hadleen laba arrimood oo kala ah xaaladda gobolka gedo iyo shirarka nabadeeynta beelaha marreexaan iyo xaaladda guud ee somalia dadaaladii ugu danbeeyay ee dib u heshiisiinta gaar ahaan qaban qaabada shirweynaha nairobi lugu qaban doono bisha september ee soo socota.
ugu danbeyntii waxaa laga soo saaray baaq ka kooban qodobbada soo socda:
1. XAALADDA GOBOLKA GEDO
a)waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beelaha marreexaan ee deggan gobolka gedo in ay dhammeeyaan qalaafaadka dhexdooda ka jira ayagoo raacaya xeerarka iyo dhaqanka soo jireenka ah ee beesha sade/marrexan
War Murtiyeedkii Waxgaradka Beesha Mareexaan ee W/Ameerika ee April 7, 2002
DIB U SIXID WARMURTIYEEDKII April 7, 2002
b)in la qabto shirweyne marreexaan oo ay isku raacsan yihiin dhammaan beelaha marreexaan kaas oo looga wada hadlayo nabadeeyn kaliya,marka lagu heshiyo shirkaasna in la abaabulo shir kale oo looga hadlayo arrimaha siyaasadda gobolka,iyo mideynta garabyada SNF ee hadda jira ayadoo shirkan ay ka soo qayb galayaan dhammaan siyaasiyinta beesha,
aqoonyahaniinta, dhallinyarada, dumarka, madax dhaqameedyada, culim- aaudinka iwm.
c)waxaan uga digaynaa cabdiraxmaan jaamac barre oo doonayo in uu af-afduubo shirweynaha nabadeynta belaha marreexaan ee reer gado ayna soo qaban qaabiyeen odayaasha marrexan, ujeedadisuna ahayd nabadeyn haddana loo rogay meel cabdiraxmaan lugu doorto si uu siyaasadda somalia dib ugu soo laabto asagoo isticmaalaya hantidii uu ka dhacay qaranka somaliyeed taas oo loogu yeeray shirka nabadeynta baardhere.
haddaba waxaan ummadda somaliyeed iyo beesha caalamkaba u sheegaynaa in uusan ahayn shirkaas mid uu marreexaan u dhan yahay.mowqifka aan ka qabno shirkaas waa mid cad,kama qayb galayno mana aqoonsanin wax kasta oo shirkaas ka soo baxo.
d)in saddaxda beelood ay sii wadaan taageerada ay siiyaan ururka SNF/SRRC oo ay horay ugu midoobeen saddaxda beelood iyo qaar ka mid ah beelaha kale ee marreexaan.
e)waxaan mahad celin iyo ammaanba u soo jeedinaynaa, guddomiyaha ururka SNF/SRRC mudane maxamud sayid aadan iyo la taliyayashiisa dadaalkii ay sameeyeen kaas oo lugu dhammeeyay qalaafkii u dhaxeeyay beesha reer axmed iyo ururka SNF/SRRC taas oo hadda lugu dhex jiro fulintii qodobbadi lugu heshiiyay.
2. XAALADDA GUUD EE SOOMAALIYA
Degaalo lagu Jabiyey Ciidanka Gumeysiga
iyo Ciidanka Gumeysiga Itoobiya oo Saadkoodkii ka Raadsanaya Shacbiga Ogaadeenya XORIYO�Agost 14
a)waxaan uga mahad celinaynaa madax weynaha dalka kenya iyo shacabka reer kenya marti galinta dadka somaliyeed ee qaxootiga ah muddadii 11 sano ee la soo dhaafay,iyo dadaallada xagga nabadda ah ee ay had iyo jeer ka dhax wadaan ummadda somaliyeed.
b) waxaan dowladaha ethiopia,kenya & djibouti oo uu ururka igad u xil- saaray qaban qaabada shirka dib u heshiisinta somalia ugu baaqayna in ay hubiyaan qaabka ka soo qayb galidda shirka,cidda matalayso gobolada dalka somalia oo la og yahay qaarkood in ay xoog ku hays- taan dad ka yimid gobollo kale,halka dadkii u dhashay goboladaas aan loo oggoleen xuquuqdooda.
c) waxaan u sheegaynaa dowladaha igad iyo beesha caalamka guud ahaan in beelaha gobolka gedo aanay ka qayb galin shirkii carta marka l laga reebo dad yar,waxaana boob ku qaatay xuquuqdii reer gedo dad ka yimid galguduud,haddaba si aanay taas mar labaad u dhicin waa in si weyn looga fiirsadaa lana hubiyaa reer gedo in si caddaalad ah wax loogu qaybiyaa.
MAGACYADA UGAASYADA IYO NABADOONNADA
Qoraalkaan oo ay ku saxiixnaayeen 15 Ugaas iyo Nabadoon waxaa magacyadooda laga xiriirikaraa ahmed A. mahamud ahmedgmw@hotmail.com oo qoraalkaan soogaarsiiyey SomaliTalk.com.
Faafin: Agoosto 14, 2002
Afeef: Aragtida qoraalkaan waxaa leh qoraaga ku saxiixan